Mianara programa amin'ny iOS 11 miaraka amin'ireto fampianarana manokana atolotra | Vaovao IPhone
Mianara programa amin'ny iOS miaraka amin'ireto fampianarana manokana ireto
Hatramin'ny nanoloran'i Steve Jobs ny iPhone tany am-boalohany am-polony taona lasa izay, ny tontolon'ny fifandraisana amin'ny finday dia niova tanteraka, ary ny fototra iorenan'ny fampiharana rehetra. Nandritra izay taona maro izay dia olona maro no nandray ny làlan'ny fampiharana sy ny fampivoarana ny lalao ary nahavita lasa tena matihanina miaina amin'ny zavatra tena iriny indrindra: fandaharana ary manangana fampiharana izay ankafizintsika isan'andro amin'ny iPhone sy iPad.
Afaka manao izany koa ianao izao mianatra amin'ny fomba mahafinaritra sy mora amin'ny fandaharana ao amin'ny iOS misaotra an'ity fisafidianana taranja telo mety ho hitanao eo amin'ny sehatra Udemy ity ary anoloranay anao a fampiroboroboana manokana.
1 Fenoy ny iOS 11 sy ny haingam-pandeha haingana: Avy amin'ny Zero mankany amin'ny manam-pahaizana amin'ny JB
2 Xamarin iOS: Mianara amin'ny Scratch to Expert
3 Fampiharana famolavolana fampiharana - apps - ho an'ny iOS sy Android
Fenoy ny iOS 11 sy ny haingam-pandeha haingana: Avy amin'ny Zero mankany amin'ny manam-pahaizana amin'ny JB
Amin'ity fampianarana ity dia hianaranao ny mandahatra ny rindranasao sy ny lalaoo manokana ao amin'ny iOS 11 ho an'ny iPhone sy iPad amin'ny alàlan'ny fiteny fandaharana Swift, ny suite fampandrosoana noforonin'i Apple manokana.
Miaraka amin'ny "Mazava ho azy fa feno ny iOS 11 sy Swift" dia ho lasa mpamorona matihanina amin'ny sehatra manam-pahaizana ianao, na dia tsy manana fahalalana teo aloha aza ianao. Hianaranao ny mampiasa Xcode 9 sy ny drafitra fampandrosoana toy ny CoreML, MusicKit, ARKit na PDFKit, ary koa ny fiteny fandaharana Swift 4 ary maro hafa amin'ny alàlan'ny programa fampiofanana mifandraika izay misy Lahatsary 56 ora azonao jerena amin'ny fotoana sy toerana rehetra amin'ny alàlan'ny tranonkala, fitaovana finday ary avy amin'ny fahitalavitrao aza, ary koa misy lahatsoratra 30, loharanom-pahalalana 41, asa maro ary fidirana mandritra ny androm-piainana.
Midira amin'ity fampianarana ity amin'ny fihenam-bidy manokana ho an'ny mpamaky iPhone News eto.
Xamarin iOS: Mianara amin'ny Scratch to Expert
Miaraka amin'ny Mazava ho azy «Xamarin iOS» dia hanao izany ianao ianaro ny tena asany iOS avy amin'ny rangotra toy ny dingana savaranonando sy tena ilaina mba ho lasa tena matihanina amin'ny fampandrosoana ny rindranasa sy ny lalao mampiasa rindrambaiko Visual Studio ho an'ny Mac amin'ny fiteny fandaharana C #.
Ilaina fotsiny ny manana solosaina Mac sy fahalalana fototra ao amin'ny C # satria manomboka daholo ny lesona rehetra, tsy misy tetikasa napetraka mialoha, mba hahafahanao mianatra mandahatra programa tsikelikely. Ny fampiasana ny kiheba ao amin'ny iOS, ny fihetsika mikasika, ny fihetsika fihodinana, ny fitehirizana ao amin'ny SQLite, ny fampidirana vatofantsika, ny famoronana rakitra IPA avy amin'ny Visual Studio, ny fiomanana amin'ny famoahana ny fampiharana, ny fampandrenesana eo an-toerana ary maro hafa, izy ireo no mandrafitra santionany kely fotsiny amin'ny zavatra rehetra hianaranao amin'ity fampianarana ity.
Ity fampianarana ity dia misy Lesona lesona 5,5 ora Azonao atao ny miditra amin'ny fotoana tianao, mametraka ny dianao manokana ary avy amin'ny fitaovana rehetra.
Fampiharana famolavolana fampiharana - apps - ho an'ny iOS sy Android
Ary farany, arosonay ity programa fampiofanana hahafahanao mianatra mianatra ity fampiharana sy lalao famolavolana tsy ho an'ny iOS ihany, fa ho an'ny fifaninanana, Android.
Amin'ity fampianarana ity dia tsy hanana fahalalana ilaina fotsiny ianao hampivelarana fampiharana izay mamaly ny filàna manokana amin'ny orinasa, fa koa hianaranao ny fomba hanaovana tombony ity fampiharana ity Ary mazava ho azy, hianaranao ny hanao prototype iraisana izay azonao aseho amin'ny mpanjifanao.
Hianatra avy hatrany ianao avy eo tsy mila fahalalana manokana teo aloha ianao amin'ny famolavolana sary, na dia atolotra azy foana aza. Ny hany ilainao dia ny Mac sy ny fitaovana iOS ary, mazava ho azy, tena te hianatra ianao ary ho lasa matihanina amin'ny famolavolana fampiharana amin'ny alàlan'ny a fitaovana avo lenta misy video, lahatsoratra ary loharano Fanampiny izay hahazoanao fidirana avy na aiza na aiza ary amin'ny fotoana rehetra.
Tolotra manokana: $ 10 Euros fampiroboroboana ho an'ireo mpampiasa iPhone amin'izao fotoana izao dia lany daty: 31 Oktobra. Kilasy hatramin'ny 200 $.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Mianara programa amin'ny iOS miaraka amin'ireto fampianarana manokana ireto
Marxter dia hoy izy:
Tena maka fanahy, Misaotra tamin'ny Info
Valiny tamin'i Marxter
Mipoitra ny antoko fahatelo mifandray amin'ny tantara ratsy "Celebgate"
Handoro ny efijery toa ny Google Pixel 2 ve ny iPhone X?